အရန်ခုံမှာ ထိုင်နေမယ့် ကစားသမား မဟုတ်ဘူး လို့ အသင်းဖော် တမ်မီ အေဘရာဟမ် ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ #ဂျရူး - SPORTS MYANMAR
အရန်ခုံမှာ ထိုင်နေမယ့် ကစားသမား မဟုတ်ဘူး လို့ အသင်းဖော် တမ်မီ အေဘရာဟမ် ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ #ဂျရူး
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျရူး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာကတည်းက နည်းပြဟောင်း မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ ရဲ့ ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်ခဲ့သလို ယခုနှစ် ရာသီ မှာလည်း လူငယ် တိုက်စစ်မှူး တမ်မီ အေဘရာဟမ် ကို နေရာ ပိုပေးနေတဲ့ ဖရန့် လမ်းပတ် ကြောင့် ဂျရူး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် တပွဲ ပဲ ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိ ထားခဲ့ပါတယ် ။
အေဘရာဟမ် ဟာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂ပွဲ ဆက် ၊ သွင်းဂိုး ၄ဂိုး အထိ သွင်းယူကာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အထောင် တိုက်စစ် အတွက် ထိုက်တန်မှု ရှိတယ် ဆိုတာ သက်သေ ပြလို့ နေပါတယ် ။ ဂျရူး ကတော့ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ မှာ လီဗာပူး နဲ့ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲ တပွဲသာ ဂိုးသွင်း ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာလည်း ဂျရူး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ထက် ယူရိုပါလိဂ် မှာသာ ပွဲထွက်ခွင့် ပိုရခဲ့သလို ယူရိုပါလိဂ် ဂိုးသွင်း ဘုရင်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ရာသီ ကုန်ခါနီး မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တနှစ် ထပ်တိုး ခဲ့တဲ့ ဂျရူး ဟာ လမ်းပတ် လက်အောက် မှာ ပွဲထွက်ခွင့် တွေ ပိုမို မျှော်လင့် နေပေမယ့် မှန်းထားတဲ့ အတိုင်းတော့ အခုထိ ဖြစ်မလာ သေးပါဘူး ။
မနေ့က ပြင်သစ် သတင်း ဌာန Le Figaro နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး မှာ ပွဲထွက်ခွင့် အကြောင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျရူး က ” အသင်း မှာ အရန်ခုံ ထပ်ထိုင် ရမယ့် အဖြစ်မျိုး ကျွန်တော် အလိုမရှိတော့ပါဘူး ။ ကျွန်တော့ ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ သွင်းဂိုး တွေ အကြောင်းပဲ ရှိနေပါတယ် ။ ကျွန်တော့ မှာ နောက်တက်လာမယ့် လူငယ် မျိုးဆက်သစ် တွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ကူညီရမယ့် တာဝန် ရှိနေပါတယ် ။ ”
” ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အနားယူမယ့် အချိန် က မရောက်သေးဘူး ဆိုတာ သတိပြုမိဖို့ လိုပါမယ် ။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုက်စစ်မှူး မဖြစ်ချင်ပါဘူး ။ လူငယ် ကစားသမား တွေ အတွက် ဘေးဖယ် ပေးနေရတာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒါဟာ ကျွန်တော့ ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကို ရပ်တန့် စေဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ”
” ကျွန်တော် နဲ့ တမ်မီ အေဘရာဟမ် အကြား က ပွဲထွက်ခွင့် တိုက်ပွဲ က ပြင်းထန်သလို မျှတမှု လည်း ရှိပါတယ် ။ ဒါမျိုး ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုန်းက မရှိခဲ့ပါဘူး ။ သူဟာ အလုပ် အရမ်း ကြိုးစား သလို ၊ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေး တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံး အသုံးချပြီး ဂိုးတွေ သွင်းနေပါတယ် ။ အကယ်၍ အခု အတိုင်း သူ ပုံစံကောင်း တွေ ဆက်ပြ နေမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် လည်း သူ့ကို ဖိအား ပေးနိုင်ဖို့ ပိုကြိုးစား ရပါမယ် ။ ”
” ကျွန်တော့ အတွက် ကတော့ ပွဲထွက်ခွင့် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ရဲ့ လက်ကျန် အချိန် တွေအတွက် စိတ်ပူစရာ ဘာ အကြောင်းမှ မရှိပါဘူး ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း ကပဲ ဂျရူး က လာမယ့် ရာသီ မှာ ချယ်လ်ဆီး ကနေ ထွက်ခွာမယ့် အကြောင်း အရိပ်အမြွက် ဆိုခဲ့သလို အခု တခါမှာလည်း ထို အကြောင်း ကို ထွက်ဆို လာခဲ့ပါတယ် ။
ဂျရူး က ” ကျွန်တော် ဟာ တရုတ် ကို ပြောင်းပြီး ငွေကြေး များစွာ ရှာလို့ ရပါတယ် ။ ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်း တနည်း နဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကို အဆုံးသတ်ချင်တယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့ အတွက် မေဂျာလိဂ် က ပိုပြီး သင့်လျော်မယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့ မိသားစု နဲ့ ကလေး တွေဟာလည်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား တတ်ကျွမ်းတာကြောင့် အင်္ဂလန် မှာ ကစားသလို လူနေမှု ဘဝ ထပ်တူ ကျလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ”
” အခုခေတ် မှာ ဘာသာစကား တွေက အရေးပါလာပါပြီ ။ နောက် ၂နှစ် အကြာ အမေရိကန် မှာ ကျွန်တော် ဘောလုံး ကစားဖို့ ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ ? ဒါမှမဟုတ် တခြား လိဂ် တခုခု မှာပေါ့ ။ ဥရောပလိဂ် တချို့ မှာလည်း ကျွန်တော့ အတွက် ကစားလို့ အဆင်ပြေမယ့် နေရာ တွေ ရှိပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
အရနျခုံမှာ ထိုငျနမေယျ့ ကစားသမား မဟုတျဘူး လို့ အသငျးဖျော တမျမီ အဘေရာဟမျ ကို သတိပေးလိုကျတဲ့ #ဂရြူး
ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ ဝါရငျ့ တိုကျစဈမှူး အိုလီဗီယာ ဂရြူး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာကတညျးက နညျးပွဟောငျး မျောရဈဇီယို ဆာရီ ရဲ့ ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုကျစဈမှူး ဖွဈခဲ့သလို ယခုနှဈ ရာသီ မှာလညျး လူငယျ တိုကျစဈမှူး တမျမီ အဘေရာဟမျ ကို နရော ပိုပေးနတေဲ့ ဖရနျ့ လမျးပတျ ကွောငျ့ ဂရြူး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ တပှဲ ပဲ ပှဲထှကျခှငျ့ ရရှိ ထားခဲ့ပါတယျ ။
အဘေရာဟမျ ဟာ နောကျဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ၂ပှဲ ဆကျ ၊ သှငျးဂိုး ၄ဂိုး အထိ သှငျးယူကာ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ အထောငျ တိုကျစဈ အတှကျ ထိုကျတနျမှု ရှိတယျ ဆိုတာ သကျသေ ပွလို့ နပေါတယျ ။ ဂရြူး ကတော့ ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ မှာ လီဗာပူး နဲ့ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလျလုပှဲ တပှဲသာ ဂိုးသှငျး ထားနိုငျခဲ့ပါတယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာလညျး ဂရြူး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ထကျ ယူရိုပါလိဂျ မှာသာ ပှဲထှကျခှငျ့ ပိုရခဲ့သလို ယူရိုပါလိဂျ ဂိုးသှငျး ဘုရငျလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ ။ ရာသီ ကုနျခါနီး မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ စာခြုပျ သကျတမျး တနှဈ ထပျတိုး ခဲ့တဲ့ ဂရြူး ဟာ လမျးပတျ လကျအောကျ မှာ ပှဲထှကျခှငျ့ တှေ ပိုမို မြှျောလငျ့ နပေမေယျ့ မှနျးထားတဲ့ အတိုငျးတော့ အခုထိ ဖွဈမလာ သေးပါဘူး ။
မနကေ့ ပွငျသဈ သတငျး ဌာန Le Figaro နဲ့ တှဆေုံ့ ခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူး မှာ ပှဲထှကျခှငျ့ အကွောငျး နဲ့ ပတျသကျပွီး ဂရြူး က ” အသငျး မှာ အရနျခုံ ထပျထိုငျ ရမယျ့ အဖွဈမြိုး ကြှနျတျော အလိုမရှိတော့ပါဘူး ။ ကြှနျတော့ ရဲ့ ခေါငျးထဲမှာ သှငျးဂိုး တှေ အကွောငျးပဲ ရှိနပေါတယျ ။ ကြှနျတော့ မှာ နောကျတကျလာမယျ့ လူငယျ မြိုးဆကျသဈ တှကေို လကျဆငျ့ကမျး ကူညီရမယျ့ တာဝနျ ရှိနပေါတယျ ။ ”
” ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော အနားယူမယျ့ အခြိနျ က မရောကျသေးဘူး ဆိုတာ သတိပွုမိဖို့ လိုပါမယျ ။ သခြောတာကတော့ ကြှနျတျော ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုကျစဈမှူး မဖွဈခငျြပါဘူး ။ လူငယျ ကစားသမား တှေ အတှကျ ဘေးဖယျ ပေးနရေတာ ဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျပမေယျ့ ဒါဟာ ကြှနျတော့ ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကို ရပျတနျ့ စဦေးမှာ မဟုတျပါဘူး ။ ”
” ကြှနျတျော နဲ့ တမျမီ အဘေရာဟမျ အကွား က ပှဲထှကျခှငျ့ တိုကျပှဲ က ပွငျးထနျသလို မြှတမှု လညျး ရှိပါတယျ ။ ဒါမြိုး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုနျးက မရှိခဲ့ပါဘူး ။ သူဟာ အလုပျ အရမျး ကွိုးစား သလို ၊ ရလာတဲ့ အခှငျ့အရေး တှကေိုလညျး အကောငျးဆုံး အသုံးခပြွီး ဂိုးတှေ သှငျးနပေါတယျ ။ အကယျ၍ အခု အတိုငျး သူ ပုံစံကောငျး တှေ ဆကျပွ နမေယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျော လညျး သူ့ကို ဖိအား ပေးနိုငျဖို့ ပိုကွိုးစား ရပါမယျ ။ ”
” ကြှနျတော့ အတှကျ ကတော့ ပှဲထှကျခှငျ့ နဲ့ ပတျသကျပွီး ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ ရဲ့ လကျကနျြ အခြိနျ တှအေတှကျ စိတျပူစရာ ဘာ အကွောငျးမှ မရှိပါဘူး ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျး ကပဲ ဂရြူး က လာမယျ့ ရာသီ မှာ ခယျြလျဆီး ကနေ ထှကျခှာမယျ့ အကွောငျး အရိပျအမွှကျ ဆိုခဲ့သလို အခု တခါမှာလညျး ထို အကွောငျး ကို ထှကျဆို လာခဲ့ပါတယျ ။
ဂရြူး က ” ကြှနျတျော ဟာ တရုတျ ကို ပွောငျးပွီး ငှကွေေး မြားစှာ ရှာလို့ ရပါတယျ ။ ဒီထကျ ပိုကောငျးတဲ့ နညျးလမျး တနညျး နဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကို အဆုံးသတျခငျြတယျ ဆိုရငျ ကြှနျတော့ အတှကျ မဂြောလိဂျ က ပိုပွီး သငျ့လြျောမယျ လို့ ထငျပါတယျ ။ ကြှနျတော့ မိသားစု နဲ့ ကလေး တှဟောလညျး အင်ျဂလိပျ ဘာသာ စကား တတျကြှမျးတာကွောငျ့ အင်ျဂလနျ မှာ ကစားသလို လူနမှေု ဘဝ ထပျတူ ကလြိမျ့မယျ လို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ ။ ”
” အခုခတျေ မှာ ဘာသာစကား တှကေ အရေးပါလာပါပွီ ။ နောကျ ၂နှဈ အကွာ အမရေိကနျ မှာ ကြှနျတျော ဘောလုံး ကစားဖို့ ဘာကွောငျ့ မဖွဈနိုငျရမှာလဲ ? ဒါမှမဟုတျ တခွား လိဂျ တခုခု မှာပေါ့ ။ ဥရောပလိဂျ တခြို့ မှာလညျး ကြှနျတော့ အတှကျ ကစားလို့ အဆငျပွမေယျ့ နရော တှေ ရှိပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။